Ukutshintsha kweenyawo kunye neClip Cord abavelisi, abaXhasi - China Ukutshintsha kweenyawo kunye neClip Cord Factory
Igama lemveliso: iipedali zensimbi engenasici (ezinkulu nezincinci) Ezinkulu: ubungakanani bempahla: 70 * 105 * 25.5mm ubungakanani beepakethe: 120x80x72mm encinci: ubungakanani bebhayisikile: 60 * 76 * 25.5mm ubungakanani bokupakisha: 103x75x62mm Ubukhulu: Ubunzima bomthwalo: 284g Gross weight: 311g Encinci: Ubunzima bomnatha: 261g ubunzima obukhulu 285g Ubude beekheyibhile: 2m Indawo yokuthengisa: 1. Izinto ezingenazintsimbi ezingenanto, ubunzima obaneleyo, aziyi kuba nomhlwa, zinganyangeki kwaye kulula ukuzicoca; 2. Kukho iiphedi zokukhusela irabha kwiipedali eziphezulu nezisezantsi, uyilo olungatyibiliki, ukuziva unyawo oluthambileyo, ...
Irabha yesiliphu esirhabaxa kunye nemijelo ephezulu kulungiso olungcono. Ifowuni-iplagi iqhagamshela nakweyiphi na into ebonelela nge tattoo. Ukucaciswa: Umbala: Izinto eziMnyama: I-Acrylic Cord ubude: Imilinganiselo. Uluhlu lwe-1.5m / 5ft yePakethe: I-1 * I-Tattoo Foot switched Pedal Packing kunye nokuhanjiswa ukuze kuqinisekiswe ngcono ukhuseleko lwempahla yakho, iinkonzo zobungcali, ezinobungozi kokusingqongileyo, ezifanelekileyo nezisebenzayo zokupakisha ziya kubonelelwa. IINKCUKACHA ZOKUTHUMELA 1. Ngaba uyathumela kwihlabathi liphela? Ewe sisebenza ngokuzisa i-WJX eve ...
Umjikelo we360 degree Umatshini wokwenza umatshini Ukutshintsha unyawo
Umbala: omnyama i-1.360-degree pedals, edityaniswe yintsimbi ethambileyo yesilicone, ubude beengcingo ziimitha ezi-1.75; 2. Uyilo olungashenxisiyo emazantsi lukhulisa kakhulu ukungalingani kokungqubana kunye nomgangatho, kwaye akusayi kuphinda kubekho ngxaki yokuhamba kweenyawo ngexesha leetattoo; 3.Ukutshintsha kweenkwenkwezi ezintlanu, inkqubela phambili encinci (cinezela ukuvula, cofa ukuvala), ukulungele ukuphela okuphezulu kunye nokuhlala ixesha elide, Sebenzisa izinto ezikumgangatho ophezulu, ukubonakala okuhle; 4. Yavavanywa ngqongqo ngaphambi kokuba ishiye umzi-mveliso; 5. Unyawo lujika ...
Unyawo lweTattoo unyawo lutshintsho olubalulekileyo kumvambo. Inoyilo oluphezulu lokutshintsha, kwaye unyawo lwakho lunyathela kuyo, iyakwenza amandla kumatshini we tattoo. Izinto zeAlloy, qaphela ngokwenene i-360 ° macala onke ukujikeleza okukhawulezayo, akukho kona efileyo. Iimpawu: izinto ingxubevange, qaphela ngokwenene 360 ​​° ngeenxa zonke conductivity ngokukhawuleza, akukho kwikona efileyo. Yenza unyawo lwakho lukhululeke kakhulu, lula ukuhamba, ukunciphisa ukudinwa kwe tattoo. Amaqhosha angama-65 ocingo lobhedu olusulungekileyo kunye nokuqhuba kombane okomeleleyo ...
Umsebenzi: Unyawo lokunyathela lobuchwephesha lokubonelela ngombane Igama: Umzobo weTattoo Package ubandakanya: 1pc Umbala: uya kuthumela ngokungacwangciswanga Izibonelelo zethu Sinamava ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava emveliso ethunyelwa ngaphandle kwiYurophu yeNtengiso yaseMelika. imiyalelo. Unxibelelwano olugqwesileyo, ezona nkonzo zibalaseleyo, uMgangatho uqinisekisiwe ngamaxabiso aphantsi okuthengisa ngokuthe ngqo kumzi-mveliso! I-OEM yamkelekile. Ukuhambisa ngenqanawa: 1. UKUTHUNYELWA KWELIZWE LONKE. 2. Ii-odolo zenziwa kwangexesha emva kokuqinisekiswa kwentlawulo. 3. Thina ...
Umba wegama: Umvambo wonyawo lweTatto Kukho iintlobo ezi-6 zenyawo yonyawo olukhethwayo. Unyawo lweTattoo lifanelana nokunikezelwa kwamandla kunye nomatshini we tattoo. Kulula ukusebenza kunye nokusetyenziswa, kulula, ukuyiphatha. Ukwenza umsebenzi wakho we tattoo kube lula kwaye kube lula. Izixhobo zobonelelo lwe tattoo kubazobi be tattoo. Iimpawu: Inkangeleko entle kunye noyilo. Zilungele zonke iintlobo zonikezelo lwamandla kumatshini we tattoo. Ukutshintsha kweenyawo ezinyaweni kusetyenziswa ukulawula utshintsho kumatshini we tattoo. Umgca wokudibanisa umde ngokwaneleyo ukuba udibanise ...
Umgangatho ophezulu weTattoo Machine Umatshini wokuTshintsha unyawo kuMboneleli waMandla oMbane
Irabha yesiliphu esirhabaxa kunye nemijelo ephezulu kulungiso olungcono. I-phono-plug iqhagamshela nakweyiphi na i-tattoo yamandla. Unyawo olusetyenziswayo lusetyenziselwa ukulawula ukutshintshwa kwamandla komatshini we tattoo. Le enyovwayo Obusemagqabini ubunjani kwaye super ukhululekile. Uluhlu lwephakheji: 1 * Umvambo weTattoo Tshintshela kwiPedal Iinkonzo zethu 1. iiyure ezimbini zinikezelwa. 2. Zonke ii-imeyile ziya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24. 3. Intlawulo yesampuli iya kubuyiselwa emva kokuba iodolo iqinisekisiwe. FAQ 1. Ndingazifumana njani iisampulu zokujonga umgangatho weemveliso? ...
Le mveliso kulula ukuyisebenzisa kwaye iya kusebenza kakuhle kuwe. Kutheni ungajongi ngoku? Amanqaku: Umphezulu ongatyibiliki kunye nesiseko esichasayo, sikhusele kunye nomgangatho wakho. Umnyama uyilo olulula lwesikwere, izixhobo ezifanelekileyo zetattoo. Ukuhlala ixesha elide kwaye kulula ukuyisebenzisa, ukhetho olufanelekileyo kwi-salon yobuhle. UkuKhanya kunye nokugcina izithuba, kusebenza kakuhle kuwe. Zilungele zonke iintlobo zomatshini we tattoo. Ukucaciswa: Uhlobo: Umzimba weTattoo Foot Pedal Material: Ubungakanani bePlastiki yento: Imilinganiselo. 9 * 6 * 2cm / 3.5 * 2.4 * 0.8in (L * W * H) Ubungakanani bento: Ap ...
Umjikelo we360 weTattoo yonyawo yokuTshintshela uPedal ngeSinyithi esenziwe ngeSinyithi soMatshini weTattoo Ukubonelelwa kwaMandla Ukucaciswa koku. Inyawo lokucofa unyawo ngokuchasene neskid, isiseko esingonakalisiyo. Zilungele zonke iintlobo zamandla oMatshini beTattoo. Iimpawu ezikumgangatho ophezulu we tattoo enyovwayo, esefashonini! Umgangatho wobungcali, inyawo lokutshintsha unyawo ngokuchasene neskid, isiseko esingonakalisiyo. Iyahlala, ihambelana, kulula ukuyiphatha kunye nokusebenzisa ...
Sijonge ifandesi ye-360Â ° Star Design Tattoo Foot Pedal ngentambo ye-5'ft kunye ne-1/4 ″ yefowuni-iplagi. Iimpawu ezingezizo i-skid anti-marring base. Ukufikelela lula kuyilo kubonelela ngolawulo lomatshini obalaseleyo. Sinokhetho olubanzi lweekiti kunye nezixhobo onokukhetha kuzo. Ulwazi lwento: Imeko: I-Brand eNtsha ye-360 ° ° yoyilo lweTattoo unyawo oNyovwayo: 5'ft Umbala: Umgangatho weSilivere 1/4 ″ intsimbi engenasici-iplagi. Isiseko esichaseneyo nesitshixo esichasayo. Lobukhulu: 3 "x 3" ...
IWave Tattoo Clip Cord kunye nentambo yeRCA
Umatshini wokugqibela we tattoo umtya wentambo yeklasikhi kunye nentambo yeRCA intambo ezi-6 ubude (malunga ne-180 cm) Ukutyeba: malunga ne-6 mm kwizinga eliphezulu i-100% ye-silicone ethambileyo, i-22 AWG yocingo lobhedu Indawo nganye yoqhagamshelo isongelwe ngombhobho weplastiki ukuthintela ukwaphuka kwegama: Umvambo weTattoo Intambo, i-RCA Cord Material: Ukusetyenziswa kweSilicon / iCopper: koomatshini be tattoo Umbala: Mnyama mthubi Luhlaza Luhlaza okwesibhakabhaka Umbala oMfusa oBomvu 1. Ukupakisha njani? -I-MOLONG Tattoo Brand Package, Iphakheji engathath'icala, Iphakheji ye-OEM (Ubungakanani obukhulu) Iyafumaneka 2. Uthini malunga nomgangatho? Ewe ...
Ubunzima bomnatha: 27g Gross ubunzima: 38g Ubungakanani: 2m * 1.8mm Ukupakisha: opp ingxowa yokupakisha Umbala: imibala emithathu emnyama - isangqa esibomvu-ujongano oluhlaza okwesibhakabhaka: Ujongano lweRCA Inzuzo: 1. Umtya wokutsala ococekileyo onesitayile esingaguquguqukiyo, umgangatho olungileyo kunye umgangatho onzima; 2.Umdibaniso wobhedu omsulwa, inqanaba eliphezulu, gqoka 3. Ubungakanani obuqhelekileyo bendalo yonke, unokuthenga kwaye usebenzise ngokuzithemba; 4. I-interface ye-silicone iyaqina, inxamnye nokuqhekeka kunye nokuchasana nokuqhekeka; FAQ Q Kuthekani ngexesha lokuhambisa? Ixesha lokuhambisa ziintsuku ezingama-3-5 ...